March 2015 - Page2of2- DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 14 Mar, 2015
Highlights of the ‘Reconciliation Debate’
The most interesting and remarkable quotes of the most recent DVB Debate, that will be aired Sunday at 7:15pm on DVB TV first. Download the ‘highlights’ in PDF by clicking this link: dvbdebate.net/press. Google+
· by DVBDadmin · 13 Mar, 2015
Reconciliation Facts & Figures
Get ready for the next Debate about ‘How real is the Reconciliation?’ . Check this fact sheet with the most important figures & views (this debate was recordedaweek before the police violence...
· by DVBDadmin ·7Mar, 2015
Highlights of the ‘Government Promises’ Debate
The most interesting and newsworthy quotes of the most recent DVB Debate, collected and selected by the editorial staff. For download in PDF click here: dvbdebate.net/press. The Debate on location in Mawlamyaing about ‘which...
· by DVBDadmin ·6Mar, 2015
Government Promises: Facts & Figures
Prepare yourself for the next DVB Debate and read this one pager with fact, figures, views and link to more about ‘Which promises did the government keep?’. This DVB Debate special is recorded on...
· by DVBDadmin ·4Mar, 2015
Next on DVB Debate:Government Promise
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပုံသွင်းဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အသွင်းပြောင်းအစိုးရသစ်ဟာ စတင်အုပ်ချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ ကတိက၀တ်များစွာပါဝင်တဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကို ပြည်သူလူထုထံ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ လို့ဆိုပြီး ကတိက၀တ်တွေပါတဲ့မိန့်ခွန်းကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက် အားဆေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကတိက၀တ်တွေထဲက အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ပြရရင်…. ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး…. သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေး…. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး…. တောင်သူလယ်သမား၊...
DVB Multimedia Group © 2019. All Rights Reserved.